TURKIGA: MAXAA KA DHAB AH INQILAABKA DHICISOOBAY? QALLINKII XASSAN CUMAR HOORRI, QAYBTA SADDEXAAD |
TURKIGA: MAXAA KA DHAB AH INQILAABKA DHICISOOBAY? QALLINKII XASSAN CUMAR HOORRI, QAYBTA SADDEXAAD
Amintii inqilaabku ka onkaday dalka Turkiga, 15 July, Madaxweyne Erdogan waxaa uu firxad kaga soo baxsaday xeebta Marmaris halkaasoo uu nasasho ku joogay. Madaxweynahu, isla markii uu ka soo degay Garoonka Caalamiga ee Ataturk, Istanbul, iyadoo weli uu cakiran yahay jawigu, waxaa uu eedda kor ka saarey wadaadka Fethullah Gulen ee ku sugan dalka Maraykanka. Xukuumaddu, waxaa ay ku sii adag tahay Xarrakada Gulen in ay ka danbaysay isku deygii afgembiga. Welina, waxaa sii socda hawlgallo lagu ugaadhsanayo cid kasta oo loo tirinayo xarrakadaa. Balse, wadaadka Gulen waxaa uu sheegay in aanu lug ku lahayn inqilaabka. Waxaana uu canbaareeyay kuwii isku deyay.
Haddaba, tan iyo
Arbacadii, dalka waxaa lagu soo rogay Xukun Degdeg ah oo loo mudeeyay saddex bilood. Xukunku, waxaa uu awood u siinaya madaxweynaha in uu dalka ku xukumo wareegto. Sidoo kale, eedaysanaha waxaa xabsiga lagu sii hayn karaa muddo ka badan intii sharcigu jideeyay, iyadoo aan la hor keenin maxkammad. Mudadaa Madaxweynahu waxaa uu faro-gelin karaa garsoorka iyo barlamaanka oo lahaa xuquuq dhowrsanaan. Waxaana uu soo saari karaa shuruuc aan la soo marin barlamaanka. Isla markaa, waxaa uu xadayn karaa xuquuqda iyo xorriyadaha muwaadinka. Madaxweynahu, waxaa kale ee uu barlamaanka ka codsaday in dib loo soo celiyo xukunka dilka oo hore loo laalay 2004.
Haddaba, dhacdadan oo isa soo taraysa (developing story), ilaa hadda, waxaa xabsiga loo taxaabay 50,000 qof oo ka tirsanaa (gaashaan-digga, booliska, garsoorka, riyad iyo macalimiin). Tiro 99 janaraal oo ka tirsanaa xoogga dalka ayaa lagu soo oogay dhagar qaran.
05:45 Galab: Xeer-ilaalintu waxaa ay badhaysaa dad warbaahinta bulshada ku faafiyay in ay xukuumaddu soo diyaarisay inqilaabkii dhicisoobay si looga takhaluso cid kastoo lid ku ah hoggaaminta Madaxweyne Erdogan.
04:21 Galab: Madaxweyne Erdogan waxaa uu sheegay ilaa hadda in ay xabsiga u taxaabeen 13,165 qof oo lagu soo eedeeyay in ay lug ku lahaayeen inqilaabka. Tiro-koobka dadkaas waxaa uu ku sheegay 8,838 ka tirsanaa ciidanka, 2,101 garsoorka iyo xeer-ilaalinta, 1,485 booliska, 52 maamulka dawladaha hoose, iyo 689 riyad ah.
Madaxweynahu, isla markaa, waxaa uu wareegto ku soo saaray in albaabada loo laabo 1,043 goobo waxbarasho gaar ah, 1,229 ururo samafal, 19 ururo shaqaale (sida urarada macalimiinta iyo dhakhtarada), 15 jaamicadood iyo 35 machad caafimaad. Dhammaan goobaha la xidhay waxaa loo aaneeyay in ay gacan saar la leeyahiin Xarrakada Gulen ee ku eedaysan isku deygii inqilaabka dabayaaqada toddobaadkii hore.
07:27 Subax: Wasiirka Waxbarashada ayaa sheegay in ay shaqada ka eryeen 21,738 kuwaas oo isugu jiray 21,029 macallin iyo 709 shaqaale ah.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa barlamaanka hortiisa kaga dalbaday shacabka in aanay bannayn jidadka ilaa iyo inta laga sifaynayo kooxo uu ku sheegay in ay shacabka ku soo weerareen hubkii laga soo iibiyay cashuurta ay bixiyeen.
05:34 Subax: Ku-xigeenka Ra’iisal Wasaaraha, ayaa u sheegay idaacadda BBC in dadka la soo xidhay ay yahiin eedaysanayaal ilaa iyo inta laga soo caddaynayo in ay denbi leeyahiin.
“Haddii ay caddaato in aanay ku lug lahayn inqilaabka, oodda ayaa laga soo qaadi doonaa. Aad ayaanu uga digtoon nahay in ay dhibaato soo gaadho qof aan denbi lahayn,” ayuu sheegay Mudane Canikli, ku-xigeenka Ra’iisal Wasaaraha.
05:03 Subax: Danjiraha Turkiga u fadhiya Pakistan, Sadik Babur Girgin ayaa sheegay in ay xukuumadda Pakistan ka codsadeen in ay albaabada u xidhaan ilaa 21 machad oo Xarrakada Gulen ku leedahay dalkaas.
04:10 Subax: Maxkamadda Ankara ayaa ansaxisay in la soo xidho tiro 73 eedaysane oo uu ku jiro wadaadka Fetullah Gulen ee deggan dalka Maraykan. Dadkaas waxaa lagu soo eedeeyay in ay ka danbeeyeen afgembigii fashilmay.
03:15 Subax: Waxaa xabsiga loo jiiday 283 ka mid ahaa ciidamada gaarka ah ee Madaxweynaha. Isla markaa, Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaa uu kala diray ciidanka gaarka ah ee madaxtooyada oo ka kooban 2500 xubnood. Ciidanku waxaa uu yahay kan ugu awoodda badan, ugu hubka fiican, uguna tababarka sarreeya ciidamada dalka iyadoo loo carbiyay in ay difaaci karaan cid kastoo soo weerarta madaxtooyada.
Sidoo kale, waxaa la buriyay sharciyadda tiro 10,850 baasaboor shaqo oo hore loo siiyay madaxda dawladda si la isu hortaago in ay ku safraan kuwo ka cararaya in la soo eedeeyo.
Sida wax u socdaan, xawliga dadka lagu soo xidhay iyo sida degdega ah ee albaabada loogu laabay adeegyada waxbarasho, caafimaad iyo ururada shaqaale waxaa aad uga biyo diiday xukuumadaha dalalka reer Yurub iyo Maraykanka. Ka sokow, in ay ka digeen in lagu tacadiyo xuquuqda dadka, waxaa ay hoosta ka xarriiqeen hawlaha socdaa in ay is hortaagayaan sidii dalka Turkiga uu ugu soo biiri lahaa Isbahaysiga Reer Yurub (EU). Waxaa kale oo ay ku hanjabeen, haddii xaaladdu sidaan ku sii socoto, in ay ka fiirsan doonaan Turkigu inuu ka sii mid ahaado Xulafada Milateri ee NATO.
Madaxweyne Erdogan, dhankiisa waxaa uu sheegay dimuqraadiyadu in ay tahay in la ixtiraamo rabitaanka shacabka. Waxaa uu ku dooday shacabku in ay doonayaan in xukunka dilka lagu abaal-mariyo kuwii soo maleegay inqilaabka. Sidoo kale, waxaa uu duray qiimo-darrida in ay ku biiraan Isbahaysiga Yurub (EU). Waxaa uu sheegay 53 sannadood in ay sugayeen in ay ka mid noqdaan Isbahaysiga Yurub iyadoo marba xubinnimada loo oggolaanayay dalal uu Turkigu kaga horreeyo dhinacyada dhowrista xuquuqda, dimuqraadiyadda, dhaqaalaha iyo horumarka.
Si kasta ha ahaatee, waxaa is weydiin mudan Xarrakada Gulen ee cabsida weyn uu ka qabo madaxweyne Erdogan ilaa ay sababtay in uu kala diro ciidankiisii gaarka ahaa? Maxaa keenay xarrakadu in ay lug ku yeelatoo ciidamada, booliska, garsoorka, waxbarashada, caafimaadka iyo ururada shaqaale?
Xarrakada Gülen (Gulen Movement?
Xarrakada Gülen ee dalka Turkigu waxaa ay tahay xarrako Islaami ah, madaxbannaan oo rayid ah. Waxaa ka taliya wadaadka Fethullah Gulen oo hadda deggan Gobolka Pennsylvania ee Maraykan. Xubnaha xarrakada waxaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yahiin 8 milyan oo isagu jira aqoonyahanno sare, xirfadlay, ganacsato, saraakiil ciidan, saraakiil rayid iyo arday. Hantida xarrakada waxaa lagu maleeyaa ilaa tobonaan Bilyan oo Doollarka Maraykan ah.
Xarrakadu muddo kontan sannadood ku dhow waxaa ay ku caan baxday dhinacyada samafalka, wacyigelinta iyo horumarinta gaar ahaan kaalinta ay kaga jirto waxbarashada dugsiyada barbaarinta dhallaanka ilaa heerarka ugu sarreeya ee jaamicadaha. Goobaha waxbarasho ee xarrakadu waxaa ay gaadhayaan Ilaa 1300 kuwaasoo ku fidsan 160 dal. Waxaa tilmaam loo soo qaadan karaa dalka Maraykanka in ay ku leeyahiin 120 goobood oo ku dheraran 30 gobol.
Dhinaca warbaahinta, xarrakadu waxaa ay leedahay telifishannada Samanyolu, Mehtap, iyo Ebru. Sidoo kale, waxaa ay gacanta ku haysaa wargeysyada dalka ugu magaca weyn sida Zaman, Today’s Zaman iyo mujaladaha Aksiyon, Sizinti, Yeni Umit, The Fountain, Hira, wakaaldda Wararka ee Cihan, iyo Raadyaha Burc FM (tr). Warbaahinta aan soo taxnay waxaa ay ku soo baxdaa afafka Turkiga, Ingiriisiga iyo Carabiga.
Waa Kuma Wadaadka Fethullah Gulen?
Muhammed Fethullah Gulen waxaa uu yahay 75 jir bukaan ah oo ku nool Maraykan. Waxaa uu bartay diinta Islaamka. Waxaa uu wax ka soo dhigay jaamicadaha. Waxaana uu qoray kutub iyo qormooyin faro badan. Isla markaa, waxaa uu ku guulaystay abaalmarinno caalami ah. Tan iyo 1999, Gulen waxaa uu iskiis isugu masaafuriyay dalka Maraykanka.
Danjirahii Maraykan ee dalka Turkiga, James Jeffrey, ayaa wadaadka ku qiimeeyay inuu yahay ninka labaad ee dalka ugu awoodda badan marka laga reebo Erdogan. Wadaadka Gulen waxaa uu dalka kaga soo baxay sababo caafimaad, hase ahaatee, waxaa soo ifbaxday inuu ka soo baxsaday garsoorka oo ku soo eedeeyay inuu waday shirqool ka dhan ahaa xukuumaddii xilligaa jirtay.
Sannadkii 2000, waxaa wadaadka lagu xukumay maqnaansho. Hase yeeshee, isla markii ay gacanta ku dhigeen taladii dalka, waxaa cafiyay xukuumaddii xisbiga Cadaladda iyo Horumrintu oo xarrakada Gulen ay iskaashi lahaayeen. Sidoo kale, racfaan Xeer-ilaalintu ka qaadatay cafiska wadaadka waxaa 2008 ganafka ku dhuftay xukuumaddii Erdogan oo ku guulaystay in ay beri (denbi la’aan) ka yeelaan wadaadka.
Sida laga warqabo, Xarrakadda Gulen waxaa ay taageeraysay Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarinta ilaa xisbigu ku guulaystay hoggaamintii dalka 2002. Muddo waxaa sii socday iskaashiga labada dhinac. Balse, waxii ka danbeeyay 2007 Xarakaddu waxaa ay ka xadhig furatay xukuumadda Erdogan. Isla markaana, ma uu jirin xisbi kale oo ay aragtida ku midoobi karaan. Dhinaca kale, Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarinta ayaa isu arkay in ay soo gaadheen isku fillaansho ay kaga maarmeen Xarakadda Gulen. In muddo ah dhinacba dhinaca kale waxaa uu ku waday dibindaabyo ilaa ay badheedh iyo si fool ka fool ah isu galeen 2013.
Haddaba, halkee ayay iska qaniineen Erdogan iyo Gulen? Halkee sartu ka qudhuntay? Maxaa sababy qarraxa colaadda labada dhinac? Ma se dhici kartaa qaab ay dib ugu walaaloobi karaan? Jawaabaha iyo waxii faallo dheeraad ah ka akhri Qaybta 4aad.
Xassan Cumar Hoorri waa suxufi ka faallooda arrimaha Geeska iyo Bariga Dhexe. Kala xidhiidh hassanhorri@gmail.comama ku tixraac Twitter @horrimania